Indlela yokuBala ubushushu obuNgxamileyo obuyimfuneko yokuDala ukutshintsha kwesigaba
Kwi-physics, l ingqalelo ubushushu bubushushu ngekhilogram ekufuneka uyongeze okanye uyisuse ukwenza into itshintshe imeko yayo; Ngamanye amagama, ubushushu obufihlakeleyo bubushushu obufunekayo ukuze utshintsho lwesigaba lwenzeke. Iiyunithi zayo ziijoule ngekhilogram (J / kg) kwinkqubo yeMKS (yemitha-yeekhilogram-yesibini).
I-physics ifumana iintlobo ezintathu zobushushu obufihlakeleyo, ngokuhambelana notshintsho lwesigaba phakathi kokuqina, ulwelo kunye negesi
Ubushushu obufihlakeleyo be-fusion, U-L f . Obu bubushushu ngekhilogram nganye obufunekayo ukwenza utshintsho phakathi kwezigaba eziqinileyo nezingamanzi, njengaxa amanzi ejika ajika abe ngumkhenkce okanye ngumkhenkce ajike abe ngamanzi.
Ubushushu obufihlakeleyo bomphunga, U-L v . Obu bubushushu ngekhilogram nganye obufunekayo ukuze kwenziwe utshintsho phakathi kolwelo nelezigaba zegesi, njengaxa amanzi ebilisa okanye xa umphunga ungena emanzini.
Ubushushu obufihlakeleyo be-sublimation, U-L s . Obu bubushushu ngekhilogram nganye obufunekayo ukwenza utshintsho phakathi kwezigaba eziqinileyo nezegesi, njengaxa umkhenkce owomileyo uphela.
Nantsi ifomula yokuhambisa ubushushu ngexesha lotshintsho lwesigaba, apho
I-phenobarbital sisiyobisi esilawulwayo
m ubunzima, kwaye U-L bubushushu obufihlakeleyo:
Apha, U-L ithatha indawo ye
kwaye c (ubushushu obuthile) ngokwefomula yokutshintsha kobushushu.
Masithi ukwivenkile yokutyela eneglasi ye-100.0 yeegram zamanzi kubushushu begumbi, i-25 degrees Celsius, kodwa ukhetha amanzi e-ice kwi-0 degrees Celsius. Ungafuna umkhenkce ongakanani? Ungayifumana impendulo usebenzisa iifomula zobushushu kuzo zombini iinguqu kubushushu nakutshintsho lwesigaba.
Uphuma kwibhodi yakho eqhotyoshwayo, uqiqa ngelithi ubushushu obufunxwe ngumkhenkce onyibilikayo kufuneka bulingane nobushushu obulahlekileyo ngamanzi ofuna ukubupholisa. Nabu ubushushu obulahlekile ngamanzi opholileyo:
injani ipilisi ye-tramadol
T bubushushu bokugqibela, kwaye T 0 bubushushu bokuqala.
Ukufakwa kwamanani kukuxelela ukuba amanzi kufuneka aphulukane nobushushu obungakanani:
Ke lingakanani iqhwa eliza kunyibilika? Oko kukuthi, ungakanani umkhenkce kwi-0 degrees Celsius oya kuyidinga ukupholisa amanzi kwi-0 degrees Celsius? Inokuba lelo lixa lilandelayo, apho U-L f bubushushu obufihlakeleyo bokudibanisa umkhenkce:
Uyazi ukuba le nto kufuneka ilingane nobushushu obulahlekelwe ngamanzi, ukuze usete oku kulingana nokuchasene nako
Uxolo, utsho kumncedisi. Nceda undiphathele iigrama ezingama-31.0 zomkhenkce ngokuchanekileyo nge-0 degrees Celsius.
ipilisi engqukuva emhlophe 54 262
Ndingathatha malini i-naproxen
icala lesiphumo se-isosorbide
Ngaba ikofu ibangela uxinzelelo lwegazi
indlela yokukhulisa inja
njani facetime kwi ipad